November 15, 2019 - ThutaSone
ခန့်စည်သူဟာ သီဟသုဓမ္မမဏိဇောတဓရ၊ အဘိဓမ္မဓရ အကယ်ဒမီ ခန့်စည်သူဆိုတဲ့ ဘွဲ့ကို လည်း ရရှိထား သူဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တုန်းက ‘’အများနှင့် မသက်ဆိုင်သောသူ’’ ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ အကောင်းဆုံး အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆုကို ရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း ‘’မေတ္တာသိင်္ဂဟ’’ အသင်းကြီးကို ဦးဆောင်ပြီး ပရဟိတအလုပ်တွေလုပ်ဆောင်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ […]
ဖုန်းကိုင်ခွင့်မရှိ အပြင်ထွက်ခွင့် မရှိသော မြန်​မာနို​ငံရဲ့ အကြီးမားဆုံး သီလရှင်​ စာသင်​တိုက်
ဖုန်းကိုင်ခွင့်မရှိ အပြင်ထွက်ခွင့် မရှိတဲ့ မြန်​မာနို​ငံရဲ့ အကြီးမားဆုံး သီလရှင်​ စာသင်​တိုက်​ စစ်​ကိုင်း သကျ ဓီတာ (ဗုဒ္ဓသမီး​တော်​များ) စာသင်​တိုက်​ ဖြစ်​ပါတယ်​။ စည်းကမ်းအရမ်းကြီးတယ်​လို့ နာမည်​ကြီးပါတယ်​။ စာသင်​သူ သီလရှင်​( သိက္ခာရှင်​​) ​ပေါင်း အပါး ( ၂၅၀) ​ကျော်​ရှိတယ်​။ ဖုန်းကိုင်​ခွင့်​မရှိဘူး။ အပြင်​ထွက်​ခွင့်​ […]
ကူညီပေးကြပါနော်အမေမုဆိုးမကြီးကို ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်နေတဲ့ သမီးလေး ဆေးကုဖို့ မတတ်နိုင်လို့ ပါ
လူ့ပြည်က အပ်တစ်စင်းနဲ့ ဗြဟ္မာပြည်က အပ်တစ်စင်း ဆုံဖို့ လွယ်တယ် ..လူ့ဘဝရဖို့က ခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့ စကားလည်း ရှိပါတယ်…ရခဲလှတဲ့ လူ့ဘဝဆိုတာ အင်မတန် တန်ဖိုးရှိပါတယ်…ဒီလိုလူ့ဘဝတွေကို ကယ်တင်ရသူတွေကလည်း အလွန်မွန်မြတ်သူတွေပါ….ခုလည်း တတ်နိုင်သူတွေ ကူညီနိုင်ဖို့ ဒီအကြောင်းလေးကို မျှဝေရတာပါ……နှလုံးအဆို့ရှင် မကောင်းလို့ အရေးပေါ် အကူအညီလိုနေတဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်အကြောင်းပါ…သူဒုက္ခရောက်ရင် သူလုပ်ကျွေးနေတဲ့ မိခင်မုဆိုးမကြီးလည်း […]
သက်တော် ၁၀၂ နှစ်ရှိ သက်တော်ရှည် ဆရာတော် ဦးပညာသာရ
သက်တော် ၁၀၂ နှစ်ရှိ သက်တော်ရှည်ရခိုင်ဆရာတော် ဦးပညာသာရပဲခူးတိုင်းlပြည်​ခရိုင်​lပန်း​တောင်းမြို့နယ်​l​ကျောက်​ဖူး​ကျေးရွှာဥသျှစ်ပင်နှင့် ၂ မိုင်ခွဲကျော်ကျော်၊ ပုသိမ်-မုံရွာ လမ်းဘေးက ကျောက်ဖူး စံပြကျေးရွာကျောင်းတော်မှာ သီတင်းသုံး​နေတော်မူသော သက်တော် ၁၀၂ နှစ်ရှိ ဆရာတော်ကြီးပါ။ ရခိုင်ပြည် ရမ်းဗြဲမြို့နယ်ဇာတိဖြစ်တယ်လိုဆိုပါတယ်။သက်တော် ၁၀၂ နှစ်ရှိပေမဲ့ ကျောင်းပေါ် ကျောင်းအောက် မိမိတပါးတည်းသွာလာနိုင်ခြင်း။သီလပေး တရားချီမြှောက်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းများကို […]
ဝမ်းသာစရာသတင်းလေးတစ်ခုပါ ငယ်ငယ်ထဲက ကွဲနေတဲ့ အဖေကို ပြန်တွေ့ခွင့်ရသွားတဲ့​ မြန်မာအိုင်ဒေါ ပြိုင်ပွဲဝင် ထက်အဉ္ဇလီ
ကယားသူလေး ထက်အဉ္ဇလီဟာ Myanmar Idol Season4မှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်…ပြီးခဲ့တဲ့ တပတ်က Myanmar Idol ပြိုင်ပွဲဝင်နေရင်း ထက်အဉ္ဇလီက ငယ်ငယ်တုန်းက ခွဲခွာခဲ့ရတဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ ပြန်ဆုံချင်တဲ့အကြောင်း မျက်ရည်တွေနဲ့ ပြောပြခဲ့တာ ပရိသတ်ကြီးတို့ မှတ်မိမှာပါ ခုတော့ ဝမ်းသာစရာသတင်းလေးတစ်ခု […]
Eco Final Year အောင်သွားလို့ အပျော်ကြီးပျော်တယ်နေတဲ့ အက်စတာ
Eco Final Year အောင်သွားလို့ အပျော်ကြီးပျော်တယ်နေတဲ့ အက်စတာ Hello အားလုံး မင်္ဂလာပါရှင့်ပထမဦးစွာ ဘုရားသခင်ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းတယ် သမီးကို နောက်ကနေဆု တောင်းပေးတဲ့ မိသားစုကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပီးတော့ Eco Final Year လည်း အောင်ပါပီ ဘွဲ့ယူတဲ့နေ့ကျရင် အားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ သမီးစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ […]
ဝမ်းသာလို့ မနေ့ညက ကျောက်ကျသွားတာ့ ရောဂါတူ သူငယ်ချင်းတွေကိုကိုယ်သောက်နေတဲ့ဆေးလေးတွေ ပြောပြချင်လို့ပါ….
မနေ့ညက ကျောက်ကျသွားတာ ဝမ်းသာလို့ ရောဂါတူ သူငယ်ချင်းတွေကိုကိုယ်သောက်နေတဲ့ဆေးလေးတွေ ပြောပြချင်လို့ပါ…. 1. Fame ကထုတ်တဲ့ ဆီးကျောက်ပျော်ဆေး ၁ရက် ၄လုံး 2. Cital ဆိုတဲ့ဆေးရည်ကိုက ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း ရေတဖန်ခွက်နဲ့ဖျော် မနက် ၁ ကြိမ် ည ၁ ကြိမ် […]
ပရိတ်သတ်တွေကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းက ငွေလမင်း သီချင်းနဲ့ ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာအိုင်ဒေါက အေးမြဖြူ
( Video ဖိုင်ကို အောက်ဆုံးမှာတွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ် ) Myanmar Idol Season4ရဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေထဲမှာ အသက်အငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ၁၇ နှစ် အရွယ် သမီးလေး အေးမြဖြူဟာလည်း ပရိတ်သတ်ကြီးရဲ့ နှလုံးသားကို အဖမ်းစားထားဆုံးလို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုကလည်း ဝါသနာကို ပံ့ပိုးအားပေးတာကြောင့် […]
တာဂျစ်စတန်ကို နိုင်ခဲ့သည့် မြန်မာအသင်းကို AYA BANK က သိန်း ၇၀၀ ချီးမြှင့်
ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၂၂ ခြေစစ်ပွဲမှာ တာဂျစ်စတန်အသင်းအား အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ မြန်မာလက်ရွေးစင်အမျိုးသားအသင်းကို AYA Bank က ကျပ်သိန်း ၇၀၀ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခဲ့တယ်လို့ မြန်မာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၂၂ ခြေစစ်ပွဲကို မနေ့ညနေပိုင်းက မန္တလာသီရိကွင်းမှာ ကျင်းပခဲ့ပြီး မြန်မာအသင်းက တာဂျစ်စတန်အသင်းကို ၄-၃ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တာပါ […]